२०७७ फागुन १७ गते, आज सोमबारको दिन तपाईको राशिफल कस्तो रहेछ ? हेर्नुहोस् | News Polar
विभिन्न अवसर जुट्नाले काममा उत्साह जाग्नेछ। प्रयत्न गर्दा लक्ष्य प्राप्त हुनुका साथै दिगो लाभ हुने काम प्रारम्भ हुनेछ। फाइदाको स्रोत पहिल्याउन सकिनेछ। सेवामूलक कामबाट धनलाभ हुनेछ। व्यवसायले थप उचाइमा पुर्याउनेछ। शुभचिन्तकहरूले साथ दिनेछन्। पढाइलेखाइमा प्रगति हुनेछ। प्रतिभा प्रदर्शन गर्दै बौद्धिक प्रतिस्पर्धामा विजयी भइनेछ।
बलजफ्ती तथा हतारको निर्णयले समस्या निम्त्याउने हुँदा व्यवहारमा सजग रहनुहोला। समयमा जुट्न नसक्दा आफ्नो काम रोकिन सक्छ। अरूका लागि उपयोग भइनेछ र बेसुरमा दिइएको वचनले अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। छातीको समस्याले स्वास्थ्य कमजोर रहनेछ। सानो असमझदारीले आफन्तजन टाढिन सक्छन्। रोकिएका काममा दोहोर्याएर प्रयत्न गर्नुपर्ला।
प्रतीक्षित नतिजाले उत्साह जगाउनेछ। आम्दानीका नयाँ स्रोत फेला पर्नेछन्। पहिले गरेका कामबाट प्रशस्त लाभ हुनेछ। आयआर्जन बढ्ने र उठ्नुपर्ने रकम हातलागी हुनेछ। कृषि, पशुपालन तथा व्यापारमा प्रशस्त फाइदा हुनेछ। चल(अचल धनको उपयोगबाट मनग्य फाइदा उठाउन सकिनेछ। मिहिनेत गर्दा दिगो लाभ हुने काममा जग बसाउने मौका छ।
अस्वस्थताले आफूलाई कमजोर भएको अनुभूति हुनेछ। काममा ढिलासुस्ती हुन सक्छ। अप्रिय समाचारले मन खिन्न बनाउला। अध्ययनमा पछि परिनेछ भने व्यापारमा सोचेको फाइदा नउठ्ने देखिन्छ। नयाँ योजना प्रारम्भ गर्न उपयुक्त साइत पर्खनुहोला। कमजोर नतिजा सच्याउन काम दोहोर्याउनुपर्ला। लगनशील भएर प्रयत्न गर्दा बिस्तारै अवरोध हट्न सक्छ।
मानसम्मान प्राप्त भए पनि आतिथ्य खर्चिलो बन्नेछ। अर्थअभावले सताउन सक्छ। लोकाचारका लागि भोगविलासका वस्तु जुटाउनुपर्ला। यात्राको प्रक्रियाले खर्च बढाउन सक्छ। आफन्तबीच आत्मीयतामा कमी आउनेछ। वादविवादले घर(गृहस्थीमा समस्या निम्त्याउन सक्छ। नयाँ परिवेशमा पुगिए पनि मनमा दुविधा कायम रहनेछ। दिगो काम थाल्न सकिनेछ।
(नेपाली पात्रो,लक्ष्मीप्रसाद बराल)
प्रकाशित : फाल्गुन १७, २०७७, ६:४९:४५
आज वैशाख ४ गते शनिवार, कस्तो बित्नेछ तपाईको आजको दिन ? हेर्नुहोस् दैनिक राशिफल
नयाँ वर्षको दोस्रो दिन वैशाख २ गते, कस्तो बित्नेछ तपाईको आजको दिन ? हेर्नुहोस् राशिफल
नयाँ वर्षको पहिलो दिन वैशाख १ गते, यी राशिहुनेको लागि आजको दिन एकदमै राम्रो ! हेर्नुहोस् राशिफल